Belarosia: Ny Olan’ny Fiteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2017 3:41 GMT
(Marihina fa tamin'ny 27 Jona 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ao anatin'ny tontolo tonga lafatra, tsy inona ny fiteny fa fomba iray ifandraisan'ny olona tsirairay – tsy misy fiteny heverina ho ambony na ambany kokoa, ary omena fandrisihana ny ankizy mba handalina betsaka izany araka izay azo atao. Ao anatin'ny tontolo tena izy, na izany aza, ampiasaina ho fitaovana ara-politika sy ideolojika matetika ny fiteny ary ao Belarosia ohatra dia nahatonga ny fiteny Belarosiana hanjavona amin'ny fampiasana andavanandro izany, ka nosoloina ny fiteny Rosiana, ary nailiky ny Belarosiana masaka ara-politika ny teny Rosiana .
Nanoratra momba ny zava-niainany farany momba ny fiteny tao anaty fiara fitateram-bahoaka iray tao an-tanàndehiben'i New York ny mpisera LJ wolny , Belarosiana iray mipetraka any Etazonia :
Androany, nisy zavatra nahaliana ahy. Raha hody avy niasa aho dia niresaka tamin'i e_ndrus [mpisera LJ] tamin'ny finday. Satria nisy vondrona tanora mainty hoditra tao anaty fiara fitateram-bahoaka nandehanako ka tena miteny [mafy] izy ireo, dia voatery nanapaka ny resako aho. Niala teo amin'ny fiara fitateram-bahoaka ny olona iray, ary afaka nipetraka aho. Naka seza malalaka aho, ary nisy vehivavy iray nipetraka teo akaikiko sy niresaka tamiko tamin'ny teny belarosiana avy hatrany. Tsy nahateny firy aho nandritra ny fotoana fohy. =) Gaga ihany koa izy raha naheno ahy niteny Belarosiana. Toa efa nampianatra izy teo aloha raha ny fijeriko azy satria mahay miteny tsara izy kanefa miadana. Liana tamin'ny reska Zanaka Am-pielezana izy (nilaza fa niezaka nitady olona izy fa tsy nahita ), ary natoroko hevitra izy tamin’ [fihaonan'ny zanaka ampielezana]. Ho hitantsika izy raha ho avy.
Indro misy valinteny tsy nampoizina kanefa tsy dia mahagaga loatra tamin'ity tantara ity :
slotoviepus: Milay! Noheveriko fa indray mandeha monja teo amin'ny fiainako aho no naheno tao anaty tramway tao Minsk ny fomba fitenin'ny olon-tsotra amin'ny teny Belarosiana – tsy tany am-pianarana, tsy teo anoloan'ny fakantsarin'ny fahitalavitra, tsy misy antony manokana, fa tao anaty tramway fotsiny… sivy taona lasa izay.
Namerina namoaka ny lahatsoratr'i wolny tao anaty diariny manokana ilay mpisera LJ baleslau. Sahala tanteraka amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambony ny fihetseham-pony :
Toy izany no miseho indraindray! Na dia ao Minsk aza dia sarotra vao maheno teny Belarosiana, ary mipetraka any Amerika i wolny.
Efa nisy ny tantara momba ny fitenin'ny Zanaka Ampielezana Belarosiana iray hafa tao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra:
adelka: And I once had a similar experience at Charles’ Bridge – my friend and I were looking at the paintings sold there, and one of the artists turned out to be from Minsk (even from […] a house next door 🙂 and speaking Belarusian. It was fun to hear this answer to our broken Czech: “How much is this?) – in pure Belarusians – like, “Girls and boys, relax and speak Belarusian, you are being understood perfectly well” :)))
adelka: Ary efa nahita zavatra toy izany aho teo amin'ny Tetezan'i Charles- nijery sary hosodoko namidy tany an-toerana izaho sy ny namako, ary nilaza ny iray tamin'ireo mpanakanto fa avy any Minsk (avy ao amin'ny […] mihitsy aza, trano iray eo akaiky 🙂 izy ary niteny Belarosiana. Mahafinaritra ny mandre ity valinteny ity amin'ny Tseky tsy manam-bola: “Ohatrinona? – amin'ny teny Belarosiana madio- toy ny hoe,” Ry zatovovavy sy zatovolahy, aza taitra ary mitenena teny Belarosiana, ho azo tsara izay lazainareo “:)))
Namaritra ny politika mifandray amin'ny fampiasana ny fiteniny ilay mpisera LJ litota_:
Indraindray, rehefa miteny Rosiana aho dia mifangaro teny Belarosiana ny fiteniko, ary hoy aho mihori-koditra hoe: “Andriamanitra ô, mety heverin'izy ireo fa mpanohitra aho !!!”
Nivadika tamin'ny teny Anglisy ilay mpisera LJ czalex ary namoaka sombin-dahatsoratra momba ny “fiteny Rosiana mifandray amin'ny fitiavan-tanindrazana ara-pitenenana tafahoatra “. Indro ny resaka iray ao amin'ny fizarana fifanakalozan-kevitra:
bacian: U can't set Russians straight anyway, there's no sense in it, so don't u waist your time on'em! 😉
czalex: that's what I'm talking about. We have our own language to switch to 😉
bacian: Tsy afaka manitsy ny teny Rosiana ianao na izany aza, tsy misy dikany izany, ka aza mandany fotoana amin'izany ianao! 😉
czalex: izany indrindra no nolazaiko. Manana ny fitenintsika manokana isika hanovana izany;)